May 6, 2021 - Babal Khabar
May62021 by EditorNo Comments
सुनको मुल्यमा तोलामा नै यति धेरैले घट्नुको कारणा यस्तो,कतिमा कारोबार भको छ त ? (पूरा हेर्नुहोस् )
babalkhabar / काठमाडौं। सुन बिक्री गरेर चाँदी खरिद गर्न थाल्दा सुनको मूल्य ओरोलो लाग्न पुगेको छ । अमेरिकाले अत्याधिक चाँदी प्रयोग हुने योजना अगाडि सारेपछि सुन बिक्री गरेर चाँदी खरिद गर्न थाल्दा सुनको मूल्य ओरालो लाग्न थालेको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले अत्याधिक चाँदी प्रयोग हुने ‘ग्रीन भ्यालु प्रोजेक्ट’ योजना अघि बढाएपछि सुन बिक्री गरेर चाँदी खरिद गर्न पुग्दा सुनको मूल्य घटन पुगेको सुन चाँदी व्यवसायी माणिरत्न शाक्यले बताए । अमेरिकाले अत्याधिक चाँदी प्रयोग हुने सोलर पावरको अवधारण ल्याएपछि सुन बिक्री गरेर चाँदी खरिद गर्न पुग्दा सुनको मूल्य घटेको हो,’ उनले भने, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले प्रस्ताव गरेको नीतिका कारण सुनको मूल्य घटेको हो ।’ अमेरिकी नीतिले गर्दा विश्व बजारमा नै सुनको मूल्य दैनिक घट्दै गएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ प्रतिऔंस १ हजार ७ सय डलर भन्दा माथि पुगेको
हावाबाट को’रो’ना भा’इ’र’स यसरी सर्छ,बच्न सबलाई यस्तो आग्रह : डब्ल्यूएचओ
को-भिड–१९ म-हामारी शुरु भएको एक वर्षभन्दा पछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले उक्त भा-इरस हावाबाट सर्ने स्वीकार गरेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरुले २०२० को अप्रिलमा नै ‘विश्वले यो चु-नौती सामना गर्नुपर्ने’ चे-तावनी दिएका थिए। तर, २०२० जुनमा केही अनुसन्धानकर्ताहरुले कोभिड–१९ सर्नका लागि माध्यम चाहिने दावी गरेका थिए। जुलाईमा विभिन्न ३२ देशका २३९ जना वैज्ञानिकले गरेको अध्ययनमा हावाको स–साना कणमा पनि कोरोना भाइरस भेटिएको र त्यसबाट पनि सं-क्रमण फैलने दा-बी गरिएको थियो। सोही महिना विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड–१९ बारे एक वैज्ञानिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो जसमा जनाइएको थियो, ‘भीडभाड र हावा पास नहुने र बन्द कोठामा सं-क्रमितसँग लामो समय बस्दा कोभिड–१९ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हावाका माध्यमबाट सर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन।’ तर, यसबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको डब्ल्यूएचओले जनाएको थियो। ब्यक्तिबीच दूरी कायम
प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा कसरी पुग्यो १५३ सांसद,हेर्नुहोस् ।
एमाले र जसपा मात्रै एक ठाउँमा हुने हो भने ओलीको पक्षमा १५३ मत पुग्न सक्छ । ओलीलाई सरकार टिकाउनका लागि जसपाको एउटा टुक्रो मात्रै भए पुग्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यतिबेला आएर किन प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन चाहे ? उनी आफ्नो पक्षमा जसरी पनि बहुमत जुटाएर सरकार टिकाउन चाहन्छन् या संसद विघटन गरेर फेरि मध्यावधि चुनावमा जान पाइयोस् भन्ने बहानाको खोजीमा छन् ? संविधानका धारा–उपधाराहरुले साथ दिनैपर्ने हुन्छ । संसदीय गणित र संविधानका सूत्रहरूले साथ नदिने खेल खेलियो भने त्यो पुस ५ को असंवैधानिक कदमजस्तै आत्मघाती गोल सावित हुन सक्छ । राजनीतिशास्त्रले भनेकै छ, राजनीति खेलको नियमअनुसार खेलिनुपर्छ । अंकगणितीय नजरले हेर्दा प्रतिनिधिसभाको गणित नबुझिने खालको छैन । प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्या २७५ हो । हाल माओवादीका चार सांसद पदमुक्त भएकाले संसदमा कायम रहेका सदस्यको संख्या २७१ हो । प्र
पछिल्लो २४ घण्टामा आज सम्म कै उच्च कोरोना संक्रमण पुष्टि, भारतको भन्दा दरलाग्दो आबस्था
२३ वैशाख, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा ९०७० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार २० हजार ३६७ पीसीआर परीक्षणमा ८९७० र ७७५ एन्टिजेन परीक्षणमा १०० जना गरी ९०७० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ५४ जनाको मृत्यु भएको छ भने २७०७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । साभार : onlinekhabar
कोभिड खोपको खरिदमा नेपालीले नै ३५ करोड कमिसनमगेपछी रोकिएको खोप खरिद
काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गर्ने भारतको सिरम इन्स्टिच्युटको नेपाली एजेन्टबीच करिब ३५ करोड कमिसनमा कुरा नमिल्दा ५० लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अघि नबढेको विवाद सतहमा आएको छ । खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी सिरमसँग एजेन्टबिनै ५० लाख डोज भ्याक्सिन खरिद गर्न खोज्दा नेपाली एजेन्टले कमिसन माग गरेर प्रक्रिया नै अघि बढ्न नदिएको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘खोप खरिदमा बिचौलियाले १० प्रतिशत कमिसन लिन खोजे, बिचौलियाको सक्रियताका कारण २७ दिनसम्म अप्ठ्यारोमा परियो,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले हिमाल खबरसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘यो २७ दिन यति निर्णायक भयो, यही बीचमा भारतमा ह्वात्तै संक्रमण बढ्न थाल्यो । त्यही कारण ५० लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।’ खोप खरिद रोकिएलगत्तै मन्त्रीले सीमित सञ्चारकर्मीसँग एजेन्टको स्वार्थ पूरा गर्न नसकिएको
राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेलगत्तै केपी ओलीले किन बोलाई हाले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक
काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहीवार साँझ मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् । आज बिहीवार साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बोलाइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । यसअघि आजै बिहान नेपाल एमालेको आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री ओली शितलनिवास पुगेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका निर्णय, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेपछि थप महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनसक्ने चर्चा समेत सुरू भएको छ । यसअघि भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि ओलीले भण्डारीलाई भेटेपछि प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वानदेखि विवादित अध्यादेश जारीसम्मका निर्णय भएका थिए । आज बिहीबारै बिहान बस
जनताको जीवन बचाउनको लागि मेयर-उपमेयरले बनाए आफु चढ्ने गाडीलाई एम्बुलेन्स; भन्छन बरु म साइकल मै हिँड्छु
तिलोत्तमाका मेयर-उपमेयरले बनाए आफु चढ्ने गाडीलाई एम्बुलेन्स; भन्छन बरु म साइकल मै हिँड्छु काठमाडौं, २३ वैशाख । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर बासुदेव घिमिरे र उपमेयर जगेश्वरीदेवी चौधरीले आफु चढ्ने गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाई बिहीबार बिहानदेखि कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीलाई अस्पताल ओसार पसारमा प्रयोग गरेका छन् । मेयर घिमिरेको लु १ झ ३६० नम्बर र उपमेयर चौधरीको लु १ झ ३२६ नम्बरको स्कर्पियो गाडीमा अक्सिजन सिलिन्डर जडान गरी एम्बुलेन्स सेवा सरहको बनाएर सर्वसाधारण बिरामी ओसारपसार गर्न लागिएको हो । मेयर घिमिरेले भने, ‘नगरवासीले चौबिसै घण्टा सवारी साधनका लागि हारगुहार गर्न थाल्नु भयो । भनेको समयमा अस्पतालसम्म लैजाने सवारी साधन नहुँदा अकालमा ज्यान जान सक्ने अवस्था पनि आउन थाल्यो । उपमेयर जी र मैले सल्लाह ग¥यौं र हामी दुवैजनाको गाडीलाई एम्बुलेन्समा रुपान्तरण गरेर अहिले बिहानदेखि बिरामी बोक
ग्यास्ट्रिक भएका व्यक्तिले यस्ता खाʼनेकुरा झुʼ क्किएर पनि खाʼनु हुँदैन नत्र ज्याʼनै जान सक्छ ।
काठमाडौँ । ग्याष्ट्रिकको समस्याले सताएको छ रु या तपाईको परिवारका सदस्य यस समस्याबाट जुधिरहनुभएको छ हुन त “भनिन्छ हरेक नेपालीलाई ग्यास्ट्रिक छ।” खानपान गर्ने तरिका नमिल्दा ग्यास्ट्रिकको समस्याले सताउने गर्छ । ग्यास्ट्रिक भनेको पेटको भित्री भाग सुन्निनु, ग्यास बढ्नु भन्ने हुन्छ । यस्तो समस्या भएमा पेट फुल्ने, हावा भरिएको अनुभूति हुने, खानेकुरा राम्ररी नपच्ने, लामो समय नखाँदा पेट पोल्ने, खान मन नलाग्ने, ढ्याउ आइरहनेलगायत समस्या हुन्छन् । यसले पाचन प्रणालीमा पनि बाधा उत्पन्न गराउँछ । जसले गर्दा शरीरमा रगत, क्याल्सियम लगायत कमी हुन जान्छ । यसको समयमै उपचार नगरेमा पेटको अल्सर र क्यान्सर नै हुन सक्छ । त्यसैले ग्यास्ट्रिक भएका व्यक्तिले खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । भुलेर पनि यी खानेकुरा नखानुहोस् । एसिडिक खानेकुराको प्रयोग नगर्नुहोस् ग्यास्ट्राइटिस भएकाले एसिडिक खानेकुराको प्रयोग गर्नुहुँदैन
रोनाल्डो आएपछि खस्किएको युभेन्टस यस्तो मच्चियो
मार्का — एक समय इटालियन सिरी ‘ए’ मा युभेन्ट्स छुनै नसकिने गरेर अगाडि थियो । त्यसैले युभेन्टसले लगातार सात लिग उपाधि जितेको थियो । इटालीको घरेलु फुटबलको शीर्षस्थानमा युभेन्टसको प्रतिस्पर्धा कोहीसँग थिएन । त्यसैले युभेन्टसले सन् २०१८ मा एउटा अझ उचाइको लक्ष्य बनायो । यसैक्रममा भित्र्याएको थियो युभेन्टसले पोर्चुगाली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो । तर त्यसै समयपछि युभेन्टसका खराब दिन सुरु भए, टोलीका योजना जतिले वास्तवमै गति लिन सकेन । यी पोर्चुगाली खेलाडीले ‘ओल्ड लेडी’ लाई पक्कै पनि थप दुई सिरी ‘ए’ उपाधि दिलाए । तर युरोपमा भने युभेन्टसले खासै केही गर्न सकेन । अझ अहिले त यी ७ नम्बरका खेलाडी छँदाछँदै युभेन्टसले घरेलु लिगको उपाधि पनि गुमाएको छ । त्यसो भनेको सन् २०११ यता पहिलोपल्ट युभेन्ट्स सिरी ‘ए’ जित्न असफल रह्यो । यस्तो हुन्छ भन्ने लगभग तय भइसकेपछि पछिल्ला केही समयदेखि सबैको नजर यिनै पाँचपल्ट